जमिन नबिगारी माछा पाल्ने ‘बायोफ्लक’ प्रविधिको सफल परीक्षण, के हो बायोफ्लक प्रविधि ? – Clickmandu
जमिन नबिगारी माछा पाल्ने ‘बायोफ्लक’ प्रविधिको सफल परीक्षण, के हो बायोफ्लक प्रविधि ?
क्लिकमान्डु २०७६ साउन २९ गते १३:५९ मा प्रकाशित
भरतपुर । चितवनमा ‘बायोफ्लक’ प्रविधिमा आधारित माछापालनको सफल परीक्षण गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका युवाले नेपालमै नयाँ प्रणाली (बायोफ्लक) मार्फत माछापालनको सफल परीक्षण गरेका हुन ।
भरतपुर–१० स्थित स्याउली बजारमा चार महीना अघिदेखि बायोफ्लक ट्याङ्कमा माछाका भुरा राखेर उनीहरुले शुरु गरेको माछापालन सफल भएको छ । “परीक्षणका रूपमा दुई हजार ७०० माछाका भुरा राखेका हौँ, पहिलो चरणको ग्रेडिङ गरियो, माछा पनि बेच्यौँ”, भरतपुर–१० का युवा कपिलराज रेग्मीले भने । पहिलो चरणको सफलतापछि व्यावसायिकरूपमा ‘बायोफ्लक’ प्रविधिमा आधारित माछा फार्म सञ्चालनमा समेत ल्याइएको उनले बताए । भरतपुर–१२ नौरङ्गेमा १७ वटा ट्याङ्क राखेर व्यावसायिकरूपमा माछापालन शुरु गरेको रेग्मीले जानकारी दिए ।
“कृषिमा केही नयाँ गरौँ भन्ने सोचका साथ हामीले यो काम गरेका हौँ”, उनले भने”, “यो प्रविधिले धेरै किसानलाई छिटो लाभ दिन सक्छ ।” युवाले बायोफ्लक प्रविधिबाट माछापालन शुरु गरेपछि यसमा धेरैको चासो बढ्न थालेको छ । “घरमा बाँकी रहेको पाँच धुरमा एउटा ट्याङ्कमार्फत दुई हजार ७०० माछाको भुरा हालेर माछापालनको परीक्षण शुरु गरेका हौँ”, अर्का युवा प्रकाश पन्थीले भन्नुभयो, “घरमा यतिबेला हेर्न आउनेको भीडभाड हुने गर्छ ।” कम लगानी र सानो ठाउँ नै माछा पाल्न मिल्ने बायोफ्लक प्रविधिबाट माछापालन गर्दा धेरै आम्दानी हुने भएपछि चासो बढेको उनले बताए । कम क्षेत्रफलमा थोरै लगानी गरेर राम्रो उत्पादन र आम्दानी गर्न बायोफ्लक विधि उपयोगी हुने उनले बताए ।
युवाहरूले युवा एग्रो फार्म तथा रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर व्यावसायिक माछापालन शुरु गरेका हुन् । भरतपुरका युवा रेग्मी, पन्थी, विरोचन पराजुली, निरञ्जन पराजुली र अविनाश पौडेलले यो व्यवसायमा सहकार्य गरेका हुन । यी युवामध्ये कोही विदेशको अनुभव त कोहीले नेपालमै व्यवसाय गरेर अनुभव सँगालेका छन् । नेपालमै केही नयाँ प्रयोग गर्दै माछामा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यका साथ यो व्यवसाय शुरु गरेको उनीहरु बताउँछन ।
माछापालनमा पछिल्लो समय विकसित भएको यो प्रविधि धेरै जमीन नभएका किसानका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ । थोरै मात्र पूँजी भएका किसानका लागि पनि यो प्रणाली निकै लाभदायक हुन्छ । यो प्रविधिबाट घरको छतमा पनि माछापालन गर्न सकिन्छ । इन्डोनेशियामा पूर्ण सफल भएको माछापालनको यो प्रविधि भारतमा पनि तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । त्यसबाट प्रभावित भएका युवाले सामाजिक सञ्जाल, युटुब, शोधपत्रलगायको सहायतामा एक पोखरी निर्माण गरेर माछापालन आरम्भ गरेका हुन । उनीहरुले व्यावसायिकरुरूपमा माछापालनका लागि इन्डोनेशियामा तालीम पनि लिएर आएका छन । यो प्रविधिबाट माछापालन इन्डोनेशियामा धेरै हुने गरेको थियो । नेपालमै पहिलोपटक पूर्णरूपमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै बायोफ्लकबाट माछापालन शुरु गरिएको युवाको जिकिर छ ।
“नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यो प्रविधि अवलम्बन गरेको छैन भविष्यमा यो प्रविधिमा जानुको विकल्प छैन”, पन्थीले भने, यसले छिट्टै नेपाललाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै बाह्य देशमा निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ ।” भरतपुरका युवाले यो प्रणालीबाट परीक्षण गरी माछापालन गरेपछि दिनहुँजसो कृषक उक्त पोखरीको अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन । पन्थीका अनुसार कम्तीमा १० जना र कहिलेकाहीँ २० जनासम्म बायोफ्लकबारे बुझ्न उनको पोखरी (ट्याङ्क) हेर्न आउने गरेका छन । यो प्रविधिका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र युटुबमा भिडियो राखेपछि देशका विभिन्न जिल्लाबाट पनि सल्लाह गर्न कृषक आउने गरको उनले बताए ।
बायोफ्लकबारे बुझ्न नवलपुरको कावासोतीबाट आएका मनोज श्रेष्ठले माछापालन गर्ने योजना बनाउँदै गरेको भन्दै बायोफ्लक नै मन परेको प्रतिक्रिया दिए । यो प्रविधिको बारेमा युवाले दिएको जानकारीले थप प्रोत्साहन मिलेको उनले बताए ।
यो प्रविधिबाट पालिएका माछालाई प्रोटिनयुक्त दाना खुवाइने हुनाले यसबाट उत्पादन हुने माछा स्वस्थकर र स्वादिलो हुन्छ । सामान्यतया पोखरीको तुलनामा कम मात्रामा दाना खुवाएर माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ । पोखरीको हिसाबमा यो धेरै सस्तो हुन्छ । परम्परागतरूपमा माछापालन गर्दा एक कट्ठा जग्गामा १५० केजीदेखि ३०० केजी मात्र माछापालन गर्न सकिन्छ तर यो प्रविधिमा सोही बराबरको जग्गामा छ हजार केजीसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक कट्ठा जग्गामा तीन डायमिटरका १६ वटा ट्याङ्क अट्छ । जसले एक सिजनमा छ हजारदेखि आठ हजार केजीसम्म माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ । माछापालनमा प्रयोग हुने ट्याङक फरक फरक साइजको हुन्छ । सामान्यतया एउटा तीन मिटर व्यासको ट्याङक रु ३० देखि ४० हजारमा तयार हुन्छ । यसमा २०० देखि ५०० केजी माछा हुर्काउन सकिन्छ ।
यो प्रविधिमार्फत माछापालन गर्नका लागि प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ । ब्याक्टेरिया हुर्काउन पर्ने, पानीमा विभिन्न तत्वको मात्रा मिलाइरहनुपर्ने हुनाले प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ । यो प्रविधि धेरै फाइदाजनक देखिए पनि यसका चुनौतीलाई राम्रोसँग सामना गर्न सकेन भने धेरै समस्यासमेत आउन सक्छ । यसमा विशेष गरेर विद्युत लगातार आवश्यक हुन्छ । यो प्रविधिमा सफल हुनका लागि समयको व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । यो प्रविधि नेपालमै पहिलोपटक सफल परीक्षण गरेको युवाको दाबी छ ।
पर्यटकलाई अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटन परी’ले स्वागत गर्ने
अर्थमन्त्रीलाई योजना आयोगका उपाध्यक्षको चुनौति, साढे ८% को आर्थिक बृद्धि हासिल हुँदैन
कर छुटमा थप कडाइ गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा, भने- कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजान्छौं
बजेटको आकार घटाएर साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी
निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने क्षमता राज्यसँग छैन, निजी सम्पत्ति उलटपुलट हुँदैनः मन्त्री अर्याल